लोकमानले समानन्तर सत्ता चलाएको कुरा सत्ताको अभ्यास गर्नेहरुलाई सोधे थाहा हुन्छ– उर्जा मन्त्री शर्मा - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
लोकमानले समानन्तर सत्ता चलाएको कुरा सत्ताको अभ्यास गर्नेहरुलाई सोधे थाहा हुन्छ– उर्जा मन्त्री शर्मा
पुुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा काम गरेर देखाउने मन्त्रीका रुपमा परिचय बनाएका छन् उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले । रुकुम घर भएका शर्माले यसअघी पनि दाहाल नेतृत्वकै सरकारमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । नेपाल बिद्युुत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेर काम सुुरु गरेका उनले कामठमाडौ उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने जस्तो प्रशंसनीय कार्यको नेतृत्व गरे । पटक पटक प्रधानमन्त्री दाहालबाटै सार्वजनिक रुपमा प्रशंसा बटुलेका शर्माले सोमबार मात्रै प्राधिकरणका तीन संचालकलाई हटाएर आफुु अनुकुलका संचालकहरु नियुक्त गरेका छन् । माओवादी केन्द्रको भावी नेतृत्वका दावेदार मध्यका एक मन्त्री शर्मासंग नेपालपाटीका लागि दीपेन्द्र खड्काले माथि उल्लेखित विषयसहित लोकमानसिंह कार्की प्रकरणका विषयमा समेत खुलेर कुुरा गरेका छन् ।
काठमाडौमा उपत्यकालाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउनुुभयो । वास्तवमै यसका पछाडीको कारण चाँही के हो ? कार्यशैलीमा गरिएको परिवर्तन मात्रै हो की अन्य कारणहरु पनि छन् ?
पहिलो कुरा राष्ट्र र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको कुरा हो । दोश्रो, केही गरि छाड्ने प्रतिबद्धता हो । तेस्रो, कुरा आफ्ना विरुद्ध आफैले खडा गरेको चुनौति हो । चौथो, यहाँभित्रका केही अनियमितता र व्यथितीहरु अन्त्य गर्दै सुधार गर्ने गरी चालेको कदम हो । मुख्य कुरा उर्जा क्षेत्रमा केही गर्ने गरी चालेका कदमहरु हुन । आफु मन्त्री हुँदाखेरी गरेका प्रतिबद्धताहरु कसरी पुरा गर्ने भन्दै चालेका कदमहरु हुन ।
अहिले तपाई र बिद्युुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चर्चा भैरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा कुनै नयाँ आयोजनाबाट उत्पादन भएको वा पुरानोको क्षमता बृद्धि गरिएको अवस्था नहुँदा नहुँदै पनि काठमाडौमा शुन्य लोडसेडिङ भयो । यो चाँही कसरी सम्भव भयो ?
मैले भनिसकेँ, सही ठाँउमा पुुगेपछी जनतालाई केही सेवा दिनुपर्छ भन्ने इच्छाशक्तीको अभावले हो ।
सरकारले भारतबाट बिद्युत खरिद गरेर देशैभरबाट लोडसेडिङ हटाउने योजना अघि सारेको छ । यो कहिलेसम्म सम्पन्न होला ?
संरचनाहरु बन्दैछन् । संरचनाहरु नबनिकन पहिले केही नेताहरुले भनेजसरी बिजुली आइपुुग्दैन । संरचनाहरु बन्ने क्रम जारी छ । ढल्केवर स्टेशन बनाउन अझै समय लाग्छ । संरचनाहरु बनिसकेपछी लिन र दिन मिल्छ । त्यसकारण संरचनालाई छिटो भन्दा छिटो निर्माण गर्ने प्रयत्नमा हामी लागिरहेका छौँ ।
भनेपछी अबको दुुई महिनाभित्र देशभरी लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ ?
मेरो काम घोषणा गर्ने होइन, काम गर्ने हो । लोमसेडिङमुक्त जनताले आफै घोषणा गर्छन । हामीले त काम मात्रै गर्ने हो ।
बङगलादेशले उर्जाको क्षेत्रमा नेपालसंग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव यहाँ समक्ष राखेको कुरा आएको थियो । बङगलादेशसंग गर्न खोजिएको साझेदारी वा सहकार्य अहिले कुन अवस्थामा छ ?
हामी अन्य मित्रराष्ट्रहरुसंग जस्तै बङगलादेशसंग सहकार्य गर्न खोजेका छौँ । भारत,चीन लगायतका मित्रराष्ट्रहरुसंग सहकार्य गर्ने तयारीमा छौँ । त्यही सिलसिलामा बङगलादेशसंग सहकार्यको कुरा आएको हो । बङगलादेशमा उर्जाको आवश्यकता छ । त्यहाँका मानिसहरु लगानी गर्न इच्छुक छन् । त्यसैले त्यो सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा छिट्टै हस्ताक्षर गर्दैछौँ ।
तर केही दिनअघी भारतीय सरकारले भारतीय लगानी बाहेका आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिद्युत नकिन्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबाट नेपाललाई केही समस्या हुन्छ की ?
बिद्युत त हामीलाई नै पुुगेको छैन । नेपाललाई नै दश हजार मेगावाट बिद्युत चाहिन्छ । पहिलो कुरा, नेपाललाई नै चाहिन्छ भनेर हामीले बेच्ने कुरा गरिरहेका छैनौँ । दोस्रो कुुरा,उसले के गाइडलाईन बनायो भन्ने कुरा भन्दा पनि ‘पावर ट्रेड अग्रिमेन्ट’का आधारमा सहकार्य हुने हो । त्यसैले अरु कुराले असर गर्दैन ।
तपाईले ठुलो मात्रामा बैदेशिक लगानी ल्याउने कुरा गर्नुभएको थियो । त्यसका केही नतिजा आउन सुरु गरेको हो ?
बैदेशिक लगानी आइरहेको छ । भर्खरै कोरियनको एउटा प्रजोक्ट आएको छ । लगानीकर्ताहरु आइरहेका छन् । नेपालमा जलबिद्युत आयोजनाहरु बनाउन चाहान्छौँ भनेर प्रस्तावहरु आइरहेका छन् ।
अब अर्को विषयमा प्रवेश गरौँ । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अलपत्र अवस्थामा छ । एकातिर प्रतिपक्षी एमालेले यसको चर्को विरोध गरिरहेको छ भने अर्केतिर जसका लागि यो पस्ताव ल्याइएको हो, त्यही शक्ती मधेशी मोर्चाले पनि असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । सरकारले अब कसरी समाधान गर्छ यो समस्या ?
यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ की हामीले सही प्रस्ताव ल्याएका रहेछौँ । प्रतिपक्षी दलले पनि विरोध गर्नु पनि विरोधका लागि विरोध मात्र हो । मधेशी मोर्चा पनि सन्तुुष्ट नहुनुु भनेपछी त हामीले सही प्रस्ताव ल्याएका रहेछौँ । यही प्रस्तावमा हामी सहमती गराउँछौँ । सहमतीको विकल्प छैन । आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकार तयार छ । मधेशी मोर्चाको माग के हो त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि हामी तयार छौँ । हामीले बीचको विन्दुु खोजेका हौँ ।
भुुईको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्ने खतरा आउँछ की ?
हामी केही पनि भुुईको टिप्न खोजेका छैनौँ । नेपालका आदीवासी जनजाती, थारु, मधेशी जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न खोजेको मात्रै हो । त्यसरी सम्बोधन गर्न खोज्दा के खस्छ ? खस्ने कुरै केही छैन । संविधानलाई संशोधन गरेर देशलाई निर्वाचन हुदै संविधान कार्यान्वयन तर्फ देशलाई लिनुपर्छ ।
पाँच नम्बर प्रदेश विभाजन गर्ने सरकारको प्रस्तावविरुद्ध जनता सडकमा छन् । त्यसलाई चाँही सम्बोधन गर्नुु पर्दैन ?
को हुन जनता भनेका ? को जनता सडकमा आए ? कसलाई जनता मान्ने ?
अस्ती त्यत्रो बुटवलमा भएको सकड प्रर्दशन देख्नुु भएन ?
लौ ! राजधानी बुटवल हुने थियो । अब हराउन लाग्यो भनेपछी केही जनता सडकमा आए होलान । त्यो एउटा कुरा हो । नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, पहाड, मधेश, हिमाललाई संविधानको दायरामा ल्याएर राष्ट्रलाई बलियो बनाउने बहस अहिले आम जनतामा चलिरहेको छ । त्यो बहसबाट कसलाई जनता मान्ने कसलाई नमान्ने कुरा थाहा हुुन्छ । ठिक छ । संविधान संशोधन गर्दा केही केन्द्रहरु यता उता होला भन्ने डर त हुने नै भयो । तर मूख्य कुरा राष्ट्रको कसरी हित हुन सक्छ भन्ने हो । राष्ट्रियतालाई कसरी सुुदृढिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हो । बहुुसंख्यक जनता अहिले संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा छन । सबैलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नराम्रो हो र ?
तर हिजो तीन दल मिलेर ल्याएको संविधानमा तराई र पहाडलाई जोड्ने गरी ल्याउने तर अहिले मधेशी मोर्चालाई मिलाउने भन्दै त्यही तराई र पहाडलाई अलग गराउने कुराले संविधानकै औचित्यतामाथी प्रश्न उठ्दैन ?
हिजो एमालेले किन दुुई नम्बर प्रदेश बनायो ? किन ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेन ? किन हस्ताक्षर गर्यो ? किन पारित गर्यो ? हिजो एमालेले गर्दा सही हुने तर पश्चिमको चौधरीहरु बसेको बस्तीलाई एक ठाउँमा ल्याउँदा आपत्ति हुने कारण चाँही के ? तर्कले पुष्टि गर्नुपर्यो नि ?
एमालेले त दुुई नम्बर प्रदेश बनाउने कुरा गल्ती थियो भनिसक्यो नी ?
हो, त्यसो हो भने गल्ती थियो भन्नुपुरयो नि त । संघियतामा कुनै जाती विषेश, समुुदाय विषेश कुरलाई स्वीकार नगर्ने हो भने त्यो अर्कै कुरा भयो ।
साँच्चिकै अहिले एमालेले भने जस्तो राष्ट्रियतामा प्रश्नचिन्ह् उठेको अवस्था होइन ?
राष्ट्रियतामा त्यतिबेला उठ्यो, जतिबेला नाकाबन्दी भयो । जतिबेला मधेशबादी दलहरु आन्दोलनमा गए, नाकाबन्दी भयो । मधेश नेपालमा रहने हो की नरहने हो भन्ने प्रश्न उठ्यो । तीनलाई त साथमा लिनुपर्यो नी । लिनुपरेन ? सिङगो मधेश, पहाड, हिमाललाई जोड्यो भने राष्ट्रियता बलियो हुुन्छ । जब जोड्दैनौँ, तब टुक्रिन्छ । एउटा समुुदायलाई धकेलिदिने कि साथमा लिने ?
त्यो भन्दा पनि कुुनै विवाद नै नभएको गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पाका जनताहरुले हामीलाई पोखरा राजधानी अपायक पर्छ । बुटवल नै पायक पर्छ भन्ने माग नाजायज हो र ?
अपायक पर्छ भने पाल्पालाई राजधानी बनाउँदा हुन्छ । त्यो अधिकार दिएकै छ । अपायकमै जानुुपर्छ भन्ने छ र ? कहाँ पायक पर्छ भन्ने त ठुलो कुरा होइन नी । निर्वाचनले पछी फैसला गर्छ । जनतालाई संघियतामा पायक पार्ने गरी गर्ने हो । अधिकार भनेको घर घरमा शासन होस् भन्ने कुरा त बाँकी नै छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसंगको दुरीलाई कम गर्न सरकार के गर्दैछ ?
वार्ता, सम्वाद, छलफल । अरु उपाय नै छैन । एमालेसंग वार्ता भैरहेको छ । लडाइ गरेर हुुदैन ।
मधेशी मोर्चाका लागि कुनैपनि हालतमा पहाड र मधेशलाई अलग गर्नुपर्ने तर एमाले कुनैपनि हालतमा जोड्पर्ने पक्षमा । भनेपछी तपाईहरु त अहिले चेपुवामा हुुनुुहुुन्छ होइन ?
समस्या भूूगोलको होइन । पश्चिम नेपालमा थारु, पहाडी, मुस्लिम र मधेशीहरुकै बसोबास छ । यो भूूगोलको कुरा हो र ? मान्छेको बसोबास त मिश्रित नै छ । त्यहाँ केही समस्या नै छैन ।
पश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुुर र पुर्वका झापा, मोरङ, सुुनसरीको विषयमा विवाद हुँदा केही गर्न नसक्ने तर विवाद नै नभएको पाँच नम्बर प्रदेशमै किन तपाईहरुको आखाँ लाग्यो ?
किनभने काँग्रेस र एमालेले हिजो यही प्रस्ताव ल्याएका थिए । अन्यत्र जाँदा फेरी विवाद होला भनेर हो । हामी थारुहरु भएको एउटै प्रदेश बनाउन चाहान्छौँ । हामीले त दश प्रदेशको प्रस्ताव त संविधानसभामै राखेका छौँ । ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका छौँ । तर हाम्रो बहुुमत त छैन । हाम्रो बल पुुगेसम्म त दश प्रदेश नै बनाउँछौ । त्यसकारण सहमती भएकोमा हामीले प्रस्ताव ल्याएको हो । हिजै काँग्रेस र एमालेबीच सहमती भएको कारणले हामीले आज सोही प्रस्ताव ल्याएका हौँ ।
तर तपाईकै पार्टीका वरिष्ठ नेता टोपबहादुर रायमाझी नै तपाईहरुको प्रस्तावका विपक्षमा हुुनुुहुुन्छ । कसरी सफल होला र ?
त्यो संस्थागत कुरा होइन । उहाँ व्यक्तीगत रुपमा बोलिरहनुु भएको छ । त्यहाँको जनताले मान्दैन । अहिलेकै ठिक छ भन्नुुहुुन्छ । तर त्यो पार्टीको कुरा होइन । पार्टीले निर्णय गरेर यो प्रस्ताव ल्याएको हो । त्यो उहाँको कुरा हो ।
संसद अवरुद्ध छ । मुुलुुकले कहिलेसम्म निकाश पाउँछ ?
एमालेले संसद खोलेपछी निकाश पाउँछ । संशोधन प्रस्ताव पारित हुुन्छ । निर्वाचन हुुन्छ ।
एमालेले भन्छ, सरकारले यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुुपर्छ । के एमालेले संसद नखोलेपनि यो प्रस्ताव टेबुुल गर्न सक्नुुहुुन्छ ?
कुुनैपनि हालतमा फिर्ता हुुदैन । संसद खुल्दै नखुलेपछी त कसरी टेबुुल हुुन्छ र ?
तपाईहरुको गणीत चाँही के हो ? साँच्चिकै यो प्रस्ताव पेश हुुन मात्र पायो भने पनि दुुई तिहाई पुुग्न सक्छ ?
हामीले गणीत हेरेर यो प्रस्ताव ल्याएको होइन । यो एउटा इस्यु हो । यसलाई प्रस्ताव मार्फत सहमतीमा ल्याएर पारित गर्ने गरी ल्याएको हो ।
असफल भएमा के हुुन्छ ?
असफल भएमा असफलै हुुन्छ । यसको अर्को विकल्प नै छैन । संसदले असफल गर्यो भने केही पनि हुुँदैन ।
त्यसपछी मधेशी मोर्चलाई कसरी सन्तुुष्ट बनाउनुु हुुन्छ ?
संसदबाट असफल भयो भने हामी केही गर्न सक्दैनौँ । संसदमा गयो भने असफल पनि हुुन सक्छ भनेर स्वीकार गरेर ल्याएको कुुरा हो । सबै कुरा सफल मात्रै हुुन्छन् त ?
यो कुरा मधेशी मोर्चालाई अग्रीम जानकारी गराउनु्भएको छ ?
मधेशी मोर्चालाई पनि थाहा छ ।
तपाईकै अग्रसरतामा ल्याइएको अख्तियारका निलम्बित प्रमुुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । यसलाई कसरी पार लगाउनुुहुुन्छ ?
संसदमा छफल भैरहेको अवस्था हो । समितिमा जान्छ । समितिले रिपोर्ट दिएपछी शतप्रतिशतले पारित हुन्छ ।
यो बीचमा यो प्रस्ताव ल्याउने तपाईहरु र एमालेबीच दुुरी देखियो । कसरी पारित होला ?
एउटा प्रस्तावमा दुरी देखिएपनि अर्को प्रस्तावमा पनि देखिनैपर्छ भन्ने छ र ?
तपाईहरु पुर्ववत् अडानमा हुनुुहुुन्छ ?
म एकदमै अडानमा छुु । यो संसद खुल्नसाथ पारित हुुन्छ ।
तपाईले चितवनको एउटा कार्यक्रममा लोकमानसिंह प्रधानमन्त्री बन्न खोजेकोले हतारमा अविश्वास प्रस्ताव आएको हो भन्नुुभएको थियो । त्यसको आधिकारिकता के हो ?
मैले हतारोमा भनेको छैन । तपाईहरुले आफै किन थप्नुुहुुन्छ । मैले भनेको यति हो, लोकमानसिंहका विरुद्ध माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव र एमालेको समर्थनमा दर्ता गरेका हौँ । त्यसमा शेरबहादुरको पनि सकरात्मक कुरामा यो प्रस्ताव आएको हो भनेको हुँ । जे भन्यो त्यही भन्नुु न ।
तर तपाईले लोकमानसिंह कार्की प्रधानमन्त्री बन्न खोजेकोले अविश्वास प्रस्ताव आएको हो भनेर त भन्नुु भएको थियो नी ?
त्यो कुरा मैले कतिबेला, कहाँ भने भन्ने बिर्सिएँ । मैले भनेको एउटा कुरा थियो, उनले समानन्तर राज्य चलाए, विधी विधान सबै ह्रास भयो । छुुट्टै राज्य जसरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग गर्ने काम भयो । लोकतन्त्रको अस्तीत्व नै समाप्त भयो । एउटा काम र जीम्मेवारी भएकोले सिङगो राज्य चलाएपछी समस्या आयो भनेर भनेको थिएँ ।
के त्यतिखेर लोकमानले त्यति धेरै शक्तीको अभ्यास गरेका थिए ?
त्यो कुरा त मैले भनिसकेँ त । सोध्नुहोस् न यहाँका मुख्य मुख्य मानिसहरुलाई । यहाँका प्रहरी प्रमुुख, मुख्यसचिवलाई सोध्नुुहोस । सबै निकायका ठुल ठुला मानिसहरुलाई सोध्नुुहोस्, तपाईलाई जवाफ मिलिहाल्छ नी ।
अलपत्र अवस्थामा रहेको अविश्वास प्रस्तावले संसद खुल्नाथ प्राथमिकता पाउँछ ?
अर्को कुरा । एमाले लगायतका दलहरुले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरोस भनिरहेका छन् । कहिले घोषणा हुुन्छ निर्वाचनको मिति ?
हामी त आजै घोषणा गर्न तयार छौँ । प्रधानमन्त्रीले भनिरहनुभएको छ । संसद त खुल्नुपरयो नी । घोषणा गरेर फेरी समस्या आउन सक्छ भन्ने छ ।
तर निर्वाचन स्थानिय तह वा निकाय कुनको गर्ने ?
निकाय र तह होइन, स्थानिय सरकारको निर्वाचन गर्ने हो ।
सार्वजनिक भएका खवरहरु अनुसार पुुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्ने कुरा पनि आइरहेको छ ?
प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुु भएको छ । यो सम्बन्धी प्रस्ताव आएको थियो तर सहमती भएको छैन भनिसक्नु भएको छ । यो सहमती हुन सक्ने कुरा पनि होइन । स्थानिय सरकारको निर्वाचन गर्ने हो ।
अनि स्थानिय सरकारको निर्वाचन संघिय संसदको निर्वाचनपछी गर्ने की अघी ?
अघी नै गर्ने हो ।
एमालेले त संघिय संसदको पछी गर्नुपर्छ भनिरहेको छ ?
एमालेले मात्र भनेर हुुन्छ ? सबै पार्टीले सहमती जनाउनुुपर्यो नी । एउटा पार्टीले भनेर थोरै हुुन्छ ।
अन्तमा, तपाईहरुले अहिलेसम्म किन निर्वाचन सम्बन्धी कानुुनहरुका मस्यौदा आएको छैन ?
मन्त्रीपरिषदबाट पास भइसकेका छन् । संसद खुल्नसाथ पेश हुुन्छन । निर्वाचनको पनि आफ्नो आफ्नो समय हुुन्छ ।
अब केही समयपछी त सरकार परिवर्तन हुने होला ?
त्यसको पनि समय हुन्छ । अहिले सरकार परिवर्तन हुुदैन ।
सहमतीको सरकार बन्ने कत्तिको सम्भावना छ ?
हामी त सहमतीको सरकार बनाउन तयारै छौँ । एमाले र मधेशी मोर्चा आए किन सम्भावना नहुने ?